Maamulka gobolka Banaadir oo ka laabtay amarkii ay saareen ganacsatada Beerta Nabadda – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka gobolka Banaadir oo ka laabtay amarkii ay saareen ganacsatada Beerta Nabadda
Kullan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo ganacsatada Beerta Nabadda ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka gobolka uu dib uga laabtay amarkii ahaa in dadka u dalxiis tagaya beertaasi aan lacag laga qaadi karin.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane oo kullanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in markii ay wada fariisteen ganacsatada Beerta Nabadda kadib, ay isla qaateen in qofkii beertaasi u dalxiis tagaya laga qaado lacag dhan $1 dollar oo markii hore lagu gali jiray.
Sidoo kale, afhayeenka ayaa sheegay in maalmaha Khamiista iyo Jimcaha xitaa aan dadka laga qaadi karin wax ka badan $1 dollar, halka markii hore dadka laga qaadi jiray $2 dollar.
Dhinaca kale, afhayeenka ayaa tilmaamay in dadka Indhoolayaasha ah iyo kuwa waayeelada ee doonaya inay beerta ku nastaan ay lacag la’aan ku geli karaan.
Go’aankaan cusub ee maamulka gobolka Banaadir ayaa yimid kadib muddo toddobaad ka badan oo muran ka taagnaa lacagta laga qaado dadka u dalxiis tagaya Beerta Nabadda ee magaalada Muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa amar uu dhawaan soo saaray ku sheegay in dadka u dalxiis tagaya Beerta Nabadda ee magaalada Muqdisho aan lacag laga qaadi karin, taasoo noqotay mid socon weysay.